Ujeeddada Barnaamijka: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Sinnaanta waa mid ka mid ah afarta qiyam ee asaasiga ah ee ku jira McKnight Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah. Waa qiime aan nafteena ku xujeyno inaan ilaalino siyaasadeena gudaha iyo dhaqamadeena, waana qiime hagaya Aasaaska maadaama aan qiyaaseyno isbedelka aan dooneyno inaan ku aragno bulshadeena guud.
Qiimahan si qoto dheer loo hayo ayaa xiraya barnaamijka Firfircoon & Bulshooyinka Sinnaanta leh wuxuuna hagaa mabaadi'da asaasiga ah, oo aan ku qeexno sida:
Awood: Jaaliyadaha Minnesota waxay wax ka qabtaan, la wadaagaan, qorsheeyaan, oo noo horseedaan mustaqbal aad u firfircoon, sinaan leh.
Barwaaqo: Dhamaan reer Minnesota waxay haystaan agabkii ay ugu baahnaayeen inay ku noolaadaan.
Ka qaybqaadashada: Reer Minnesota waxay buundooyin ka dhistaan khadadka kala duwanaanshaha, si wada jir ah u xalliyaan dhibaatooyinka, iyo kobcinta bulshooyinka sinnaanta iyo dhaqaalaha ku firfircoon.
McKnight wuxuu horumariyey barnaamijkan maxaa yeelay waxaan u aragnaa sinnaanta inay tahay awood isku dhufasho badan oo kobcisa tayada nolosha dhammaan reer Minnesota. Dhammaanteen waan ka faa'iideysaneynaa markaan kor u qaadno fursadda loo siman yahay iyo helitaanka deggeneyaasha Minnesota oo dhan, gaar ahaan kuwa taariikh ahaan aan si buuxda ula wadaagin guul-darrooyinka dhaqaale, waxbarasho, iyo bulsho ee gobolkeenna sida Black Minnesota, Bulshooyinka asaliga ah, reer Minnesota ee midabka leh, iyo kuwa hoose. dakhliga reer Minnesota.
2021 Samaynta Deeq-waxbarashoEeg Deeqaha dhow